Unyana wam udlala yedwa kwikhefu - Ingcebiso evela koomama namhlanje | Oomama Namhlanje
Unyana wam udlala yedwa kwikhefu
UAlicia tomero | 24/05/2021 10:00 | ekufundeni, Iingcebiso, Phuhliso, Intsapho
Ikhefu yinxalenye yolonwabo kunye neyentlalo, apho abantwana bayonwabela imidlalo yabo, bayiphepha indawo yabo kwaye banqamle. Kodwa kwenzeka ntoni xa unyana wethu edlala yedwa kwikhefu? Mhlawumbi umntwana incinci kakhulu kwaye ifuna umdlalo ngamnye, okanye kunokwenzeka xa umntwana emdala kakhulu kwaye ehambahamba ebaleni lokudlala okanye ephepha ukuba phakathi kwabantwana kwaye efuna ukuya kufunda kwilayibrari.
Inyani yokuba udlala yedwa inokukhokelela kuthotho lwemicimbi ekufuneka ihlolwe. Konke kunokuxhomekeka kubudala bomntwana okanye kwisitayile semfundo ukuba uthatha ekhaya kwaye lonto yenza ukuba umntwana abe nombono owahlukileyo wobomi. Nangona kunjalo, inkwenkwe okanye intombazana kufuneka idlale, bebodwa okanye behamba kunye, njengoko kubonelela ngokufunda kwabo kunye nokujongana nobomi.
1 Luphi uphawu lokuxhalaba xa umntwana wakho edlala yedwa kwikhefu?
1.1 Ndifanele ndixhalabe nini?
2 Ungamnceda njani umntwana xa ekule meko
Luphi uphawu lokuxhalaba xa umntwana wakho edlala yedwa kwikhefu?
Abantwana bahlala kumanqanaba abo okuhlalisana, uvelwano kunye nokudlala ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke kubudala bakho. Kwiminyaka emi-2 ukuya kwemi-4 abantwana abasaxoleli, iminqweno yabo isafuna ukuhlangabezana neemfuno zabo kwaye baqwalasele yonke into ebangqongileyo ukuba baqale ukuziva ubomi. Kule minyaka bangaqala ukuba nomdla kumdlalo, kodwa ngokwahlukeneyo, bayathanda ukudlala nabazali babo okanye umhlobo omncinci, kodwa abanangxaki nokwenza wedwa. Kwiminyaka emi-4 ubudala, sele eqala ukufuna ukwabelana ngemidlalo yakhe nabanyeBaqala ukuba nobuhlobo ngakumbi kwaye kulapho baqala khona ukuphuhlisa ulawulo lwabo nabahlobo nasesikolweni.
Sele sikhankanyile ukuba umntwana ngamnye uqhubeka ngendlela eyahlukileyo kwabanye, kodwa indlela aziphethe ngayo inokuba nexhala xa etshintshe ngesiquphe kwaye siyabona ukuba unendlela yokuziphatha eyahlukileyo kwabanye abantwana. Sinokukrokra xa ingahambelani nokukhula esikunike omnye wabantwana bethu.
Ukuba phakathi kweminyaka eyi-2 kunye ne-4 uyathanda ukuba wedwa kwaye wenze iipatheni zokuhamba ezingaqhelekanga, njengokugungqa okanye ukugungqa, ukuzibetha, ukubamba, ukubetha entloko, njl.
Xa usekhefini okanye epakini ejikelezwe ngabantwana kwaye iyamkhathaza indlela abadlala ngayo kwaye bayangxola, iyamoyikisa yonke intshukumo, xa zibaleka okanye zixhuma.
Xa ufikelele kubudala be-5 kwaye ufuna ukuba wedwa, akafuni ukuya esikolweni, akathethi ngomhlobo eklasini yakhe, akamemeli umhlobo endlwini yakhe okanye izimvo zokuba abahlobo besikolo abafuni ukuba kunye naye.
Ungamnceda njani umntwana xa ekule meko
Abazali kunye nootitshala bahlala benxibelelana kwimeko enjalo. Abazali abaninzi baziva bexhalabile malunga nale meko kwaye banokuya kuyo Iiseshoni zokuQhelaniswa neMfundo kunye neNzululwazi. Apha umntwana uya kujongwa ngeliso elibukhali kunye nendlela yokwenza izinto ngendlela elungelelanisiweyo eya kuvavanywa.
Abazali badlala indima ebalulekileyo yenkxaso. Ngamaxesha onke kufuneka uyamkele indlela enza ngayo kwaye umenze abone ukuba angatshintsha njani ngothando oluninzi kunye novelwano ukutshintsha isimo sakhe sengqondo. Kuyimfuneko ukubhengeza zonke izinto ezahlukeneyo kunye nemixholo enokubonelela ngayo kwaye ubone ukuba ungadibana njani nayo yonke.
Kukho oko menze azamkele kwaye uyabathanda abanye abantwana ngokufanayo ngentlonipho. Ayisiyonto eyakhayo ukuthelekisa umntwana nabanye abantwana okanye nabantakwabo. Kananjalo akufuneki sibonise ukuba ubulolo abubi, njengoko besisoloko sixelelwa njalo. Abantu abadala kufuneka babe ngumzekelo wokuqala, Bamele babone ukuba sinovelwano ngabanye kwaye sikufutshane nabanye ootata noomama.
Musa ukusoloko unyanzela umntwana ukuba enze into angafuniyo ukuyenza. Ungamtyisi nokuba ulixhoba, kwaye ungamsizeli xa ebona ukuba akenzanga nto ilungileyo ukumnceda ukuba akhule. Umntwana unokuhlala ekhuthazwa ngendlela ekhululekile yokudibanisa kunye nokudlala ngokwendalo nabanye abantwana. Ngaphambi kokulala ungathetha ngento oyenzileyo imini yonke kwaye uvavanye ukuba zingaphi izinto ezintle ozenzileyo. Sinokwenza njalo xa ebuya esikolweni.
Kufuneka siyamkele loo nto ngabantwana bethu kufuneka zikhule kwaye zilawule iimvakalelo zazo ngokwesantya sabo, ngemiceli mngeni ekufuneka bajongane nayo ebomini babo. Ukuba yonke into siyenza ngothando nangokuzimisela, sinokumnceda umntwana ukuba abe ngumntu omdala odibeneyo ngokupheleleyo eluntwini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Unyana wam udlala yedwa kwikhefu
Itekhnoloji yeentsana: ke ngoku nangoku
Umngcipheko we-fistula wokubelekisa kunye nothintelo